#CODE - Koorsada Horudhaca Barnaamijka - Geofumadas
Baro barnaamijyada, aasaaska barnaamijyada, qulqulka qormooyinka iyo tirooyinka, barnaamij-ka-xoqidda
Wuxuu doonayaa inuu wax barto
Baro sida barnaamijyada loogu dhejiyo kombuyuutarka
Ku rakib barnaamijka PseInt (Waxaa jira cashar sharraxaya sida loo sameeyo)
Ku rakib barnaamijka 'DFD' si aad u abuurto qulqulka socodka (Waxaa jira cashar gaar ah oo sharraxaya sida loo sameeyo)
Kombiyuutarka si aad u fuliso dhammaan howlaha.
Wax ka baro aasaaska barnaamijyada barnaamijkan leh koorsada hordhaca ah laga bilaabo xoqidda loogu talagalay kuwa raba inay wax ka bartaan xoqitaanka fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijka iyo ku celceliyaan.
Koorsadan Hordhaca barnaamijka waad ogaan doontaa Rabbiga Aasaaska Barnaamijyada Waxaad baran doontaa sida loo abuuro Flowcharts iyo Pseudocodes qaab aasaasi ah oo aad u dhameystiran.
✔ Galaangal mareegtayda
Qiimaynta qaar ka mid ah ardaydeenna horay u qaatay:
Juan de Souza -> Xiddigaha 5
Waa koorso kaamil ah kuwa aan wali la soo xiriirin wax barnaamij barnaamij ah. Barashada maaddadan ka hor intaadan gelin barnaamijyada waxay noloshaada ka dhigi doontaa mid aad u fudud. Waxaan rajeynayaa inaan helay koorsadan sanad ka hor. Kani waa hordhaca keliya ee koorsada barnaamijyada lagu barayo habka 'pseudocode' iyo qulqulkaha-socodka ee aan helay. Aad ufiican
Eliane Yamila Masuí Bautista -> Xiddigaha 5
Khibraddu aad bay u fiicnayd maaddaama sharraxaadda ay aad u faahfaahsan yihiin oo uu u sharraxay hagaha. Guul!
Jesús Ariel Parra Vega -> Xiddigaha 5
Waxaan u arkay inay si fiican tahay !!
Macalinku wuxuu u soo bandhigayaa qaab aad u cad oo sax ah, fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijka. Intaas waxaa sii dheer, waxay baraysaa sida loo isticmaalo laba barnaamij oo u oggolaanaya barashada qaab ka sii is-barasho ah. Sharrax fikradaha oo tusaalooyin iyaga ka mid ah adiga oo adeegsanaya aaladda la soo jeediyey bilowga koorsada.
Santiago Beiro -> Xiddigaha 4.5
Aad bay ugu caddahay inay sharxaan oo gudbiyaan aqoonta. Waxaan kugula talinayaa koorsada.
Alice Ilundain Etchandy -> Xiddigaha 1.5
Waxay u egtahay wax aad u xun inaan sii wado ku darista maaddada si markasta oo aan ugu laabto websaydhka Udemy ay iila muuqato inaan wali haysto waxyaabo aan dhammaystiro.
Waad garan doontaa asaasiga oo dhan, ilaa baro barnaamij, Aqoonta aad ku baratay koorsadan waxaad yeelan doontaa aasaaska aasaasiga ah si aad u fahamto luqad kasta oo barnaamijyada aad rabto.
Inta lagu guda jiro horumarka koorsada, jimicsiyada ayaa lagu horumarin doonaa Pseudocode y Duulista
Koorasku wuxuu u qaybsan yahay dhowr qaybood:
Qaab dhismeedka algorithmic
Ku celcelinta qaabdhismeedka algorithmic
Qaban-qaabada iyo Matrices
Y waxaa jira qaybo badan oo koorsada lagu dari doono si joogto ah haddii aadan wax dambe sugin oo haddii aadan ku qanacsanayn lacagtaadii la soo celiyo.
Casharka loogu talagalay
Dhamaan dadka jecel inay bartaan barnaamijyada
Ardayda bilaabeysa dunida barnaamijyada
Ardayda Injineerka Nidaamka
Ardayda rabta inay wax ka bartaan aasaaska ilaa ay kafiiri karaan fahmitaanka barnaamijyada.
Afeef: Koorsadani waxaa markii hore loo sameeyay dadweynaha Isbaanishka. Iyada oo laga jawaabayo dalabka isticmaaleyaasha ku hadla Ingiriisiga, tayada waxbarashadiisa iyo waxtarka ay leedahay, waxaan waqti ku bixineynaa qeybtan. Maqalka iyo sharraxaadda waxay ku qoran yihiin Ingiriis, in kasta oo barnaamijka kumbuyuutarka ee software-ka la isticmaalay iyo qoraalka qaar ka mid ah laylisyada muunadda lagu hayey af Isbaanish si aysan u waayin codsashada.
Post Previous«Previous #GIS - QGIS 3 koorso talaabo talaabo ah oo xoq ah
Post Next #LAND - Koorso Madaniga ah 3D loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 4Next »